दाङमा पनि देखियो सलह - Goraksha Online
दाङ, १४ असार । दाङमा पनि विनाशकारी सलह किरा देखा परेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा आइतवार सलह किरा देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ । आइतवार बिहान तुलसीपुर–४ का स्थानीयले आफ्नो ठाउँमा सलह किरा देखिएको खबर गरेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख सन्देश धितालसहितको टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो । उक्त टोलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ४ मा देखा परेको किरा सलह भए/नभएको परीक्षणका लागि नार्कको कार्यालयमा पठाएको र त्यहाँबाट सलह किरा भएको पुष्टि भएको प्रमुख धितालले जानकारी दिएका छन् ।
तुलसीपुरमा देखा परेको सलह किरा झुण्ड सानो भएको किसानलाई त्रसित नहुन समेत कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीयले खबर गरेपछि बुझ्नका लागि हामीले उक्त स्थान पुगेका थियौं’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख धितालले भने– ‘हामी त्यहाँ पुगेर उक्त किरा सलह भए÷नभएको प्रमाणित गर्न नार्क पठाएका थियौं, त्यहाँबाट सलह भएको पुष्टि भएको छ ।’ उक्त स्थानमा देखिएको सलह किरा सानो समूहमा रहेकाले किसानलाई त्रसित नहुनसमेत धितालले आग्रह गरे ।
जिल्लामा देखिएको सलह कुनै झुण्डबाट छुट्टिएर आइपुगेको जस्तो देखिएको उनले बताएका छन् । थोरै संख्यामा रहेकाले किसानलाई छोपेर नियन्त्रणमा ल्याउनसमेत आग्रह गरेको बताए । उनले अहिले नै रासायनिक औषधि छिर्कनुपर्ने अवस्था नभएको समेत बताएका छन् । ‘सलह देखिए पनि किसानको बालीमा कुनै असर देखिएको छैन’, उनले भने– ‘अहिले तुलसीपुरको वडा नं. ४ मात्र देखा परेको छ, अन्य स्थानमा भने अझै देखा परेको छैन ।’
सलहबारे कृषि बैज्ञानिक डा. बुद्धिप्रकाश शर्मा भन्छन् :
नेपाल आएको सलह डिजर्ट लोकस प्रजातिको हो । सायद नेपालभर यसले आक्रमण पनि गर्न सक्छ । एउटा झुण्डमै ४ देखि ८ करोडको संख्यासम्ममा हुन्छन् । यो अफ्रिकाबाट आएको हो । पाकिस्तान हुँदै भारतमा आयो, एक महिनाअघि । अब उत्तरप्रदेश हुँदै नेपालमा प्रवेश ग¥यो । हिजो दिउँसो साढे २ बजे बुटवलमा देखिएको थियो ।
दाङमा पनि आउन सक्छ । यदि त्यो पूरै समूहमै आएको भए आकाशमा कालो बादलजस्तै देखिन्छ । तर उछुट्टिएर आउने होइन । आठै करोड नआएर एउटा समूह मात्र आएको पनि हुन सक्छ । यहाँ आएको डिजर्ट लोकस प्रजाति सलहले कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने विवरण नै लिन सकिँदैन । यदि यो सबै झुण्ड आए एकै दिनमा ३५ हजार मान्छेलाई पुग्ने अनाज खाइदिन्छ । आफूले २ ग्राम खान्छ ।
यसको जीवनचक्र ५ महिनासम्मको हुन्छ । ५ महिनामध्ये अन्यत्र कति समय बिताएर आएको हो, त्यो थाहा पाउनुपर्दछ । दुई महिना मात्र उडेर खाने हो । ठूला प्लटिङमा खेतीपाती हुने स्थानमा ड्रोनबाट विषादि पनि छर्कने चलन छ । तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन । पाकिस्तानमा विषादिले पनि नभएपछि जसले एक किलो सलह टिप्छ, त्यसलाई निश्चित पैसाले किन्ने नीति त्यहाँको सरकारले ल्यायो । त्यसलाई दाना बनाउने काममा उपयोग पनि गरियो । यसले प्रोटिनयुक्त दाना बन्ने रहेछ ।
दाङकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धुँवा बालेर, आवाज निकालेर, थाल ठटाएर हटाउने हो । दुईचार कठ्ठा बारीलाई दिनभरी ड्युटी दिएर पनि बचाउन सकिन्छ । दाङको भू–वनावटले सलह आउने र यहाँबाट जाने क्रमलाई कुनै फरक प्रभाव पार्दैन । किनकी २ हजार मिटरसम्म अग्लो स्थानमा पनि यो उड्न सक्छ । त्यसकारण दाङमा नआउने र यहाँबाट नभाग्ने भन्ने हुँदैन । सलहबाट अन्नबाली र बिरुवा बचाउने उपायका बारेमा सबैले सतर्कता देखाउनुपर्दछ ।